wordpress – nyiminkha
ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း အီးမေးလ်နဲ့ gmail ကို ချိတ်ပြီးသုံးမယ်
Posted on August 8, 2017 Leaveacomment on ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း အီးမေးလ်နဲ့ gmail ကို ချိတ်ပြီးသုံးမယ်
ထုံးစံအတိုင်း သိပြီးသား လူတွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကိုယ်ပိုင် hosting နဲ့ website တစ်ခုရှိတယ်၊ အဲဒီ ဝက်ဘ်ဆိုက်နာမည်နဲ့ အီးမေးလ်ကို သုံးချင်တယ်၊ ပိုက်ဆံလည်း အကုန်မခံချင်ဘူး၊ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းလည်း ခုထိ မသိသေးဘူး ဆိုသူတွေအတွက်ပါ။ ကဲ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး​​ပြောမနေတော့ဘူး၊ အဆင့် (၂) ဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်၊ စ လိုက်ကြရအောင်….၊
၁။ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းနဲ့ အီးမေးလ်အက်ကောင့် လုပ်မယ်
၁။ hosting control panelကို log in ဝင်ပါ၊
၂။ Email ဆိုတဲ့ အောက်က Email Accounts ကို နှိပ်ပါ၊
Posted on September 20, 20137Comments on ကိုယ်ပိုင်နေရာလေး တစ်ခု
စာမရေး ဖြစ်တာ တော်တော်လေးလည်း ကြာနေပြီ၊ စာတစ်ပုဒ် တစ်ပုဒ် ရေးဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်လို ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင် တစ်ယောက် အတွက် ပိုလို့ မလွယ်။ ဒီတော့ ဒီပို့စ်မှာ အင်တာနက်ပေါ် ကျွန်တော် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းလေး အကြောင်း အနည်းငယ် ရေးမယ် စိတ်ကူးထားတယ်။ ကျွန်တော့် ဘဝမှာ ဘာတစ်ခုကိုမှ လွယ်လွယ်ကူကူ မရခဲ့ဘူး ဆိုတာလေး ခဏခဏ ပြန်တွေးနေမိလို့ပါ၊ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စာမရေးဖြစ်တာ ကြာလို့ စာရေးကြည့်ခြင်းပါပဲ။
Posted on August 29, 20133Comments on ဇော်ဂျီမှသည် ယူနီကုဒ်သို့
ဘယ်က စပြောရမလဲ၊ ကျွန်တော် တော်တော် နောက်ကျနေတာကတော့ သေချာပါတယ်၊ အချိန်တော်တော် ကြာကတည်းက လူတော်တော် များများ ယူနီကုဒ် ယူနီကုဒ်နဲ့ ပြောတာ ကြားတော့ ကြားဖူးခဲ့တာပဲ၊ ၂၀၀၉ လောက်ကလား မသိဘူး၊ myanmar php က ကျွန်တော့် cbox မှာ ယူနီကုဒ် သုံးဖို့ လာပြီး တိုက်တွန်း သွားခဲ့သေးတယ်၊ ၂၀၁၀ ၂၀၁၁ လောက်မှာတော့ ယူနီကုဒ်က အသံ ပိုကျယ်လာတယ် ထင်ရတာပဲလေ၊ တကယ်တော့ အဲဒီ အချိန်တွေလောက် ကတည်းက ကျွန်တော်လည်း ယူနီကုတ်ကို ပြောင်းချင်နေခဲ့တာ၊ ဒါပေမယ့်ပေါ့ဗျာ၊Continue Reading
why does facebook like box not work for logged out user?
Posted on August 16, 2013 1 Comment on why does facebook like box not work for logged out user?
ဒီပြဿနာကို တခြားလူတွေ ကြုံဖူးကြလား မသိ၊ ကျွန်တော်လည်း အရင်က သူများဆိုက်တွေမှာ ထည့်တုန်းက ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ အခုမှ ကိုယ့်ဆိုက်မှာ ထည့်မယ် လုပ်တော့မှ ကြုံရတယ်။ ဆိုက်တော်တော် များများမှာ facebook like plug in လေးတွေ ထည့်ထားကြတာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒါကို ဘယ်လို လုပ်လည်း ဆိုတာတော့ မပြောတော့ပါဘူး၊ ကျွန်တော် ကြုံရတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ဖြေရှင်းလိုက်ပုံကိုပဲ အတိုလေး ပြောပါမယ်။
how to switch mobile responsive theme
Posted on May 6, 2013 Leaveacomment on how to switch mobile responsive theme
မိုဘိုင်းခေတ် ရောက်လာတော့ မိုဘိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တာလေး နည်းနည်းပါးပါး ပြောချင်လာတယ်၊ ဆရာကြီး မဟုတ်ပေမယ့် တတ်သလောက် မှတ်သလောက်လေးပေါ့ဗျာ၊ မြန်မာကျူတိုရီရယ်က တင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတာက ၀က်ဘ်ဟာ ဖွဲ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေမှာ PC အဆင့်ကို ကျော်ပြီး တခါတည်း mobile ဘက်ကို ကူးပြောင်း လာတာတွေ့ရပါတယ် ဆိုလားပဲ၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ရှိတယ်ဆိုရင် user တွေအနေနဲ့က အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် devices မျိုးနဲ့ ကြည့်ကြမှာပဲလေ၊ ဒီထဲမှာမှ အများစုက မိုဘိုင်းနဲ့ ကြည့်ကြမယ်ဆိုတာ ပြောနေစရာတောင် မလိုပါဘူး၊ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က တတ်နိုင်သမျှ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်လေ။
လွတ်ကျသွားသော နေ့စွဲများအကြောင်း (929)
ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း အီးမေးလ်နဲ့ gmail ကို ချိတ်ပြီးသုံးမယ် (852)
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ သိပါတယ် (745)
rss feed error (728)
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်ရယ် စာအုပ်တွေရယ် (693)
ဇော်ဂျီမှသည် ယူနီကုဒ်သို့ (686)